Izinqolobane ZaseTraintravel | ikhasi 6 ka 16 | Londoloza Isitimela
Tag: Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ingabe wena uthanda ukuhlala ngaphandle enkulu? Sizama ukuxoxa amahlathi, emachibini, yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Izintaba, ngebhayisikili, futhi jikelele fresh air ubuhle. Khona-ke bethola amapaki amahle kakhulu kazwelonke e-Europe, futhi kanjani lapho ngesitimela. Khohlwa izixuku, ukhohlwe amabhishi, khohlwa…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ngaso sonke isikhathi sizama ukwenza kwethu nakho wokujikeleza kangcono futhi sisebenzise izindlela ezahlukene namacebo ukuze wonge imali, isikhathi nomzamo. Ukujabulela iholide ezindaweni ezingaphesheya kwezilwandle kusho ukuthi ufuna ukwenza isikhathi sigqame. Abantu abathathe uhambo oluya eYurophu bajabulele inani…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Kulabo abazi ukuthi banayo kakade, IBlack Forest yisifunda esinamahlathi amakhulu eningizimu-ntshonalanga yeJalimane. Ngini ngokuqondile, ukuthi etholakala isimo Baden-Württemberg futhi ithatha ingxenye enkulu kakhulu-ke. Ngaphezu kwalokho, esifundeni ivuliwe umngcele waseFrance naseSwitzerland, ngakho-ke iyatholakala…
Izinzuzo Key Of yokubhuka zemininingwane Amathikithi Online
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Isevisi ye-inthanethi kuye kwasenza sakwazi ukuthenga cishe konke inthanethi. Kusukela ukudla iyala, izingubo, zobuchwepheshe ukuze ukubhuka amathikithi for imibukiso movie futhi wenze inkokhelo, singenza amaningi izinto inthanethi. Ukubhuka ithikithi lesitimela online kungenye inzuzo esinayo…
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Into yokuqala abantu bacabangani uma uyazibuza Kuyini imodi esheshayo ikhambo eYurophu flying. ngabe Kodwa singavumelani! Ngenkathi ezindizayo langempela kungenzeka ngokushesha, akukho kancane kuka zezindiza ukuba ngilinganisele isikhathi sokuhamba empeleni ugcine….
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe...
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Uma eside ukubona ezinye uyisidingo ukuvakashelwa izindawo eYurophu, ezimbalwa ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu friendly ngokuqinisekile liyokwenza ohlwini lwakho. Lezi imizi mikhulu ukuhlola ngesithuthuthu, okuwenza yokuhlawula ngebhajethi. Futhi ungafika lapho…